Mpanentana amin'ny bilaogy fitsangatsanganana | Fitsangatsanganana tanteraka
Orinasa an'ny sehatry ny dia ary te hanao dokambarotra amin'ny Internet ve ianao? dia Fitsangatsanganana tanteraka no tadiavinao. Ny tambajotranay atiny dia manolotra anao ny fanohanana kalitao miavaka tsara mba hahomby ny fampielezan-kevitrao.
Manana bilaogy natokana ho an'ny:
tanànan'izao tontolo izao
lohahevitra fitsangatsanganana: fitsangantsanganana an-tsambo, sidina, toeran-kaleha misy torapasika sy ranomasina, sns.
Miara-miasa amin'ireo endrika sora-baventy lehibe eny an-tsena izahay - megabanner, mpangalatra pejy, Sky, ... - ary koa ny karazan-karazan-banitra richmedia na fampidirana mandroso. Mifandraisa aminay mba hahazoana ny tombony rehetra sy ny tahan'ny dokam-barotra.